Chitendero muMorocco | Absolut Kufamba
Marokero inyika inonamata, uye sekureva kwa deginamajai nyika Chokwadi chebhuku, 99% yeMoroccans maMuslim. ChiKristu ndicho chechipiri chitendero chikuru uye chave chiri muMorocco kubvira pamberi pekuuya kweIslam. Kune maJuda mashoma munyika sezvo vazhinji vavo vadzokera kunyika dzakakomberedza, neIsrael ichitambira maJuda akadzoka. Mumakore achangopfuura huwandu hwevasina-chitendero hwave huri kuwedzera muMorocco.
1 Chitendero muMorocco yekare
2 Nzanga yechiIslam
3 MuMorocco yanhasi
4 Zvitendero uye vashoma vasingatendi kuna Mwari
5 Kodzero dzechitendero uye rusununguko muMorocco
6 Islam: chitendero chehurumende
Chitendero muMorocco yekare
Nyika iyi, yaimbogarwa naBerbers, yakatanga kupinda nechisimba nevaFenikiya, ichiteverwa nemaCarthaginians, uye gare gare nevaRoma. ChiJudha ndicho chakarebesa nhoroondo yezvitendero muMorocco.
Kuvapo kwaro kwakadzokera kunguva dzeCarthagininian muna 500 AD. Zviverengero zvikuru zvevaJudha zvakauya kuMorocco mushure mekuparadzwa kwetembere yaro yechipiri nevaBhabhironi. Iyo ChiKristu chakatora munguva dzeRoma, uye maJuda akatarisana nerusarura kubva kuchiKristudhomu chinotsigirwa nehurumende panguva iyi.
Muna 680 AD, maArabu akapinda munyika, nevagari vayo vakatendeukira kuIslam. Kuuya kwechipiri kwemaJuda kwakauya kuMorocco mushure meAlhambra Chirevo che1492, chakavadzinga muSpain.
Muna 680 AD, maUmayyad, boka remaArabu kubva kuDhamasiko, vakapinda kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweAfrica, vachiuya neIslam. Nekufamba kwenguva veko maBerbers vakatendeukira kuIslam vakawedzera kuve muna 788 AD, apo Idris I weZaydi wekutenda kwechiShiite akatanga kekutanga. Dzinza reIslam muMorocco.
Muzana ramakore regumi nerimwe, maAlmoravids akagadza humambo hunosanganisira mazhinji eMorocco azvino uno uye akaitwa chikoro Maliki yemitemo, chikoro chesangano reSunni, iro rakanyanya muMorocco.
Islam yakakunda muMorocco kubva muzana ramakore rechinomwe, uye nedzinza reAlawite rinotsigira Muporofita Muhammad semadzitateguru. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevaMuslim muMorocco ndezvavo Sangano reSunni nepo makumi matatu muzana vari maMuslim asiri emasangano MaSunni anotenda kuti baba vezvematongerwo enyika vaive Muhammad Abu Bakr aive caliph wayo wekutanga.
Pane zvakasiyana, ari shiites ivo vanofunga kuti yaive ali bhini Abi Talib, mukuwasha wake nehama yake. Chikoro chakakurumbira cheSunni muMorocco chikoro cheMaliki chemitemo, chinovimba neQurani uye hadith semanyuko ekurairidza.
Zvitendero uye vashoma vasingatendi kuna Mwari
Kuwanda kwemaJuda muMorocco kwakadzikiswa zvakanyanya zvichienzaniswa nenhamba dzakanyorwa munguva dzekare. Vazhinji kwazvo vakatamira kunharaunda yeIsrael iyo yakavambwa muna 1948. Vamwe vakatamira kuFrance neCanada.
Kutenda Baha'i ine vateveri vari pakati pe150 ne500 kuMorocco. Chitendero, icho chakavambwa muzana ramakore re19th, chinodavira muna Mwari mumwe uye chinotenda mukubatana pamweya kwevanhu vese. Vamwe veMoroccan vanozivisa sevasina-chinamato, kunyangwe paine zvakawanda kupfuura zvavanotaura, zvakadaro, sezvo vazhinji vachitenda kuti vari kuchengeta kusatenda kwavo kuna Mwari chakavanzika nekutya kudzingwa, uko kunosanganisira izvo zvinozivikanwa sekutapwa kwezvematongerwo enyika.
Kodzero dzechitendero uye rusununguko muMorocco
Kunyangwe bumbiro rayo richipa iyo VaMoroccans rusununguko rwekunamata ivo vanoda, sezvo kodhi yenyika yechirango ine mitemo yakati kuti inosarura vasiri maMuslim, semuenzaniso: Imhosva muMorocco kuva neBhaibheri rechiKristu rakanyorwa muchiArabic.
Mutemo uyu wakaitirwa rambidza kutendeuka kubva kumaMuslim echiArabhu kuenda kune chimwe chitendero. Marokero inozivikanwa pakati penyika dzeArabhu nekuda kwechimiro chayo chinoshivirira chiIslam. Mamiriro ekushivirira anogona kutsanangura kukwezva kwenyika kune vashanyi vanobva kumativi ese epasi. Iyo zvakare inoratidzira nyika inoonekwa inodzivirira kuzvitendero zvechisimba.
Islam: chitendero chehurumende
Nhasi Islam ndiyo chitendero chehurumende Bumbiro remitemo rakamisikidzwa uye mambo vanosimbisa kuve kwavo semusoro wehurumende uye chinamato - muchidimbu, hunhu hwake hunobva pane zvinonzi iye wedzinza reMuporofita Muhammad. Vakakomberedza ⅔ vevagari maSunni uye makumi matatu muzana vasiri vemasangano vechiMuslim. Bumbiro rinopa kodzero uye chengetedzo kuIslam zvakasiyana nezvimwe zvitendero, kusanganisira kuzviita zvisiri pamutemo kuyedza kushandura muMuslim kuenda kune chimwe chitendero.
Humambo hweMorocco idare reparamende rine humambo nehurumende yakasarudzwa. Iyezvino mambo, King Mohammed VI, ane chinzvimbo chemutungamiri wezvematongerwo enyika uye "Muchinda weVatendi" (chikamu chezita rake repamutemo) - saka ane mamwe masimba ekutonga ematare emapazi ehurumende uye uye ari mutungamiriri wechitendero wenyika nevatungamiriri vezvitendero vese vari pasi ku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chitendero muMorocco